10 Tekinoroji Blogs Iwe Wawaisaziva Nezve | Martech Zone
10 Tekinoroji Blogs Iwe Wausingazive Nezve
Muvhuro, Ndira 25, 2010 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Technology Blogs zvakakosha kuti Martech Zone. Kana ini ndanyora nezvekuti chaiyo tekinoroji iri kukanganisa kushambadzira, inowanzo kukurudzirwa nehunyanzvi blog. Ivo vanowanzoita basa rakakura kuvhara nhau uye maonero nezve tekinoroji, asi vachipotsa pane anoshanda ekushambadzira mashandisiro acho.
Ivo vakomana vakuru vari kugara vachiedza kuwana iyo hombe nhau scoop, yekupedzisira makuhwa, kana kuyedza kukanda imwe huru post zita iro rinobata kutarisisa kwevanhu vese. Pane zvakawanda zvirikuitika muTekinoroji izvo iwe zvaunofanirwa kuziva nezvazvo, zvakadaro. Ava vanhu vanogara vari pamusoro pazvo!
Heano gumi Technology Mabloggi Awaisaziva Nezve:
Chii Noo - Patric ishamwari yakanaka uye kambani yake inodzidzisa 'vasiri teki'.
Kunyora Kutya - Jeff ane zano risingakoshi uye kunyora kwake kunogara kuri kuseka.
Ken McGuire - Ken anofukidza mashandisiro ari kuita tekinoroji hupenyu hwedu hwezuva nezuva.
Asi Uri Musikana - pane kushomeka kwemazwi echikadzi muTech nzvimbo. Adria irikuizadza.
StarterTech - Iyi blog inoita kuti tekinoroji ive nyore kuverenga.
Tekinoroji & Kushambadzira Mutemo Blog - Eric anovhara ese matare edzimhosva anokanganisa tekinoroji uye vashambadzi zvakafanana.
Chip's Quips - Yakareba-nguva shamwari ye Martech Zone, Chip inogara ichikwenya dzimwe dzenyaya dzakanakisa pamambure.
2 Kutongwa kana Kuderera - Kunyangwe ipfupi pane yeChip zvinyorwa, shamwari Bill Dawson anoramba ari kumberi kwetekinoroji uye anopa dzimwe tsananguro dzepithy.
Nzungu kune purofiti - imwe shamwari yeblog, Thor Schrock anosanganisa tech uye purofiti pane yake blog.
Yese Joe's Technology Blog - akanaka shamwari Jason Bean anowanzoitika pane yega Joe blog.
Dzimwe nguva mablog haashaye anotaridzika kutarisa uye kunzwa - asi zvirimo zvinogara zviripo! Wedzera aya mablog kune ako feed feed uye ini ndine chivimbo kuti hauzonyadziswe.
Tags: kuchengetwa kwevatengidata rezvemagariro
ChaCha Yakangwara kupfuura Google here?
Ivo Cobblers Vana Havana Bhutsu
Ndira 29, 2010 na7: 24 PM
Wow, ndatenda, Doug! Ini ndinokudzwa kuverengerwa mune yakadai saugust runyorwa - kunyanya nevanofarira vaJeff Atwood.